Natiijada doorashada madaxtinimada Maraykanka oo goor dhaw la filayo. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Natiijada doorashada madaxtinimada Maraykanka oo goor dhaw la filayo.
Natiijada doorashada madaxtinimada Maraykanka oo goor dhaw la filayo.
Previous articleWasaarada Qorsheynta oo shirka Banbaxa Golaha Wasiirada ku soo bandhigtay Qorshaha Horumarinta Qaranka,+(SAWIRRO).
Next articleKulan looga hadlayay xoojinta wada-shaqeynta hay’adaha ka howlgala xuduudaha dalka oo Muqdisho ka furmay+(SAWIRRO).